Tobonaan qof oo ku dhagana mudo 2 maalmood ah doon degtay oo laga soo badbaadiyay badda - Horn Future
Rome(Reuters )-Saraakiil katirsan ciidamada ilaalada xeebaha ee Libya ayaa sheegay in lasoo badbaadiyay maanta oo Jimca ah ku dhawaad 80 qaxooti ah xeebaha dalka Libya kadib markii ay ku dhageen doontii ay saarnaayaan muddo 2 maalmood oo degtay,halka 7 maydad ah lasoo saaray.
Masuuliyiin katirsan Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka ee (IOM) iyo saraakiishan Libyan ka ah ayaa sheegay in 77 qaxooti ah oo ay ku jirto qof dumar ah iyo ilmo yar ay ka badbaadeen shalay Khamiistii meel ka baxsan xeebta galbeed ee Libya.
Afhayeen u hadlay Ilaalada xeebaha oo ku sugan Tripoli Ayoub Qassim ayaa sheegay in dadkan badbaaday ay ku dhaganaayeen muddo 2 maalmood ah doontii ay saarnaayeen oo degtay ilaa laga soo samatabixinayay.
Sarkaalkan ayaa waxa uu farta ku fiiqay inay doontu awoodi kari wayday inay socdaalkeeda sii wado sababtoo oo ah buu yidhi tirada xad-dhaafka ah ee rakaabka saarnaa.
Afhayeenkan ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadka badbaaday ay soo gaadhay gubasho xagga jidhka ah oo ay sabab u tahay biyaha muddada dheer ay ku jireen iyo cedceedda,waxan ay heleen daaweyn caafimaad kadib markii lagu wareejiyay doon ka tirsan Ilaalada xeebaha.
Dhinaca kale ilaaladda xeebaha Italy ayaa sheegay in ku dhawaad 2,300 qaxooti ah oo saarnaa doonyo caag iyo looxaan ka sameeysan laga soo badbaadiyay biyaha caalamiga ah ee u dhexeeya Italy iyo Libya shalay Khamiistii.
Waxa sido kale ilaalada xeebaha Italy ay xaqiijisay in in ka badan 34 qaxooti ah oo ay ku jiraan carruur ku qaraqmeen badda Mediterranean ka.
Madaxa ilaalada xeebaha Italy Cosimo Nicastro ayaa sheegay in mid kamid ah doonyahan si lama filaan ah ay u kala jabtay taas oo sababtay dhimashada ku dhawaad 200 oo qof badhtahama biyaha badda Mediterranean ka,waxana uu intaa raaciyay in uu arkay ugu yaraan 20 maydad ah oo ku jira biyaha dhexdooda.
Dhinacooga ilaalada xeebaha Libya ayaa sheegay inay kasoo badbaadiyeen 237 qaxooti ah xeebaha magaalada Sabratha ee galbeedka magaalada caasimadda ah ee Tripoli, oo ay ku jiraan 20 haween ah iyo 15 carruur ah kuwaas oo saarnaa 2 doonyood oo ka sameeysan looxaan.
Waxa xusid mudan in tan iyo bilowgii sanadkan in ka badan 50 kun oo qaxooti ah ay gaadheen xeebaha Italy, korodh ah in ka badan 47% marka loo eego isla muddadaas sannadkii la soo dhaafay, sida laga soo xigtay tirakoob ay baahisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Italy Isniintii la soo dhaafay.
« Hornfuture waxay eebe uga rajaynaysaa Soon la aqbalay iyo cibaado Suuban akhristayaasha sharafta leh	» Trump aide sought secret channel with Kremlin: reports